Lufthansa Value dia hitombo eo anelanelan'ny $ 2.5 miliara dolara
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa Value dia hitombo eo anelanelan'ny $ 2.5 miliara dolara
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • Fitaterana
Ny Birao Mpanatanteraka ao amin'ny Deutsche Lufthansa AG anio, miaraka amin'ny fankatoavan'ny Birao Mpanara-maso ny orinasa, dia nanapa-kevitra ny hampiasa ny Capital C nahazo alalana ho an'ny fisondrotana renivohitra miaraka amin'ny zon'ny mpamandrika an'ny orinasa. Ny kapitalin'ny orinasan'ny orinasa ankehitriny dia 1,530,221,624.32, mizara ho 597,742,822, dia hampitomboina amin'ny famoahana 597,742,822 sanda vaovao tsy misy fatran'ny orinasa.
Tamin'ny Jona, eTurboNews Nitatitra imomba ny drafitra alain'ny drafitra fiaramanidina Lufthansa Alemanina momba ny fiakarana renivohitra.
Ny vola miditra dia andrasana hatramin'ny EUR 2,140 tapitrisa. Ny vidin'ny famandrihana EUR 3.58 isaky ny New Share dia mifanaraka amin'ny fihenam-bidy 39.3% amin'ny TERP (vidin'ny zon'olombelona taloha).
Ny tahan'ny famandrihana dia 1: 1. Ny fizarana vaovao dia atolotra ny tompon-tany an'ny orinasa mandritra ny vanim-potoana fisoratana anarana, izay antenaina hanomboka ny 22 septambra 2021 ary hifarana amin'ny 5 Oktobra 2021.
Ny fifanakalozana zon'olombelona dia antenaina hanomboka amin'ny 22 septambra 2021 ary hifarana amin'ny 30 septambra 2021.
Ny fifanakalozana dia nosoratan'ny sindikatsa 14 banky. Ho fanampin'izany, vola sy kaonty maromaro eo ambany fitantanan'ny BlackRock, Inc. no nanao fifanarahana fanoratana ho an'ny totalin'ny 300 tapitrisa EUR ary nanolo-tena hampiasa tanteraka ny zon'izy ireo.
Ny mpikambana rehetra ao amin'ny Birao Mpanatanteraky ny Orinasa dia nanolo-tena handray anjara amin'ny fampitomboana ny renivohitra ary hampihatra ny zon'ny famandrihana rehetra voaray mifandraika amin'ny anjarany manontolo.
Ny fampisondrotana ny renivohitra dia natao hanamafisana ny toeran'ny vondrona Equity. Ny orinasa dia hampiasa ny vola azo mba hamerenana amin'ny laoniny ny Fandraisana anjara mangina I amin'ny Tahirim-bola fanamafisana toekarena ao amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana (ESF) amin'ny sandan'ny EUR 1.5 miliara.
Ankoatr'izay, ny orinasa dia mikasa ny hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny Fandraisana anjara mangina II amin'ny haben'ny EUR 1 miliara amin'ny faran'ny 2021 ary mikasa ny hanafoana ny vola tsy voarohirohy amin'ny Fandraisana anjara mangina I amin'ny faran'ny 2021.
Ny ESF, izay mitazona 15.94% ny renivola ampaham-bolan'ny orinasa, dia nandray andraikitra hanombohana ny famoahana ny tombotsoany amin'ny orinasa alohan'ny enim-bolana taorian'ny nahavitan'ny fampisondrotana ny renivohitra, raha ny ESF no misoratra anarana amin'ny fampisondrotana ny renivohitra. Amin'ity hetsika ity, ny famoahana dia hofaranana 24 volana aorian'ny fanakatonana ny fiakaran'ny renivohitra, raha toa ka averin'ny orinasa ny fandraisana anjara mangina I sy ny fandraisana anjara mangina II araka ny kasaina hatao.
Ny tolotra ampahibemaso ny New Shares any Alemana dia natao irery tamin'ny alàlan'ny prospectus fiarovana izay neken'ny Alemana Federal Financial Supervisory Authority (BaFin), izay homena, ankoatry ny hafa, eo amin'ny tranokalan'ny Lufthansa Group . Ny fankatoavana dia antenaina homena amin'ny 20 septambra 2021. Tsy hisy ny tolotra ampahibemaso ivelan'i Alemana ary ny prospectus dia tsy eken'ny rafitra mpanara-dalàna hafa.